I-loft kaChiara - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Chiara
I-La Mansarda di Chiara, esanda kulungiswa, itholakala amamitha angu-10 ukusuka olwandle kanye nenkaba yedolobhana elincane eliseceleni kolwandle. I-La Mansarda di Chiara ilungele abantu abashadile (noma abantu abashadile abanengane), abafuna ukuhlala enkabeni ye-Marina di Ragusa futhi bakhohlwe uhambo lwemoto. Ukuphonsa itshe ezindaweni zokudlela, ama-bar, ama-pizzerias namamakethe amakhulu, indawo yokuhlala inakho konke ukunethezeka kanye ne-veranda encane ebheke olwandle lapho ungaphumula khona ngokuphelele.
I-La Mansarda di Chiara, esanda kulungiswa, itholakala amamitha angu-10 ukusuka olwandle kanye nenkaba yedolobhana elincane eliseceleni kolwandle. I-La Mansarda di Chiara ilungele abantu abashadile (noma abantu abashadile abanengane), abafuna ukuhlala enkabeni ye-Marina di Ragusa futhi bakhohlwe uhambo lwemoto. Indawo yokuhlala inendawo yokuhlala enekhishi nosofa, indlu yokugezela enkulu eneshawa, ikamelo elilala abantu ababili kanye ne-veranda ebheke ulwandle lapho ungaphumula khona.
"I-La Mansarda di Chiara" itholakala enkabeni yedolobhana elincane eliseceleni kolwandle, i-Piazza Duca degli Abruzzi, ukuxhumana nezindawo zokudlela, ama-pizzerias, ama-bar nezidingo eziyisisekelo (i-Pharmacy, i-ATM). Ungahamba kalula ukuya emabhishi amahhala ogwini, i-Marina nomzila womjikelezo uma kwenzeka ufuna ukuphumula ngokugijima.
Ngihlale ngizama ukuhlangabezana nezidingo zezivakashi zami futhi ngenze ukuhlala kwazo kube ntofontofo ngangokunokwenzeka.